Telegram တွင်ခလုတ်များဖြင့်စာများဖန်တီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းသစ် Androidsis
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါပဲရတယ် Androidsis Youtube channelVideo, အတွက်နည်းလမ်းအသစ်တခုအပေါ်သင်ခန်းစာ Telegram တွင်ခလုတ်များဖြင့်စာတိုများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစွာဖန်တီးပါ.
ခလုတ်များပါသောစာများ၊ ကြမ်းတမ်းသောစာတိုများ၊ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်ဗွီဒီယိုဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသောဤနည်းသစ်ကိုရသောအခါတစ်မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ ဒီတစ်ယောက်ယောက်ကိုဒီလူတွေကိုသင်ပို့ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Technochollos လိုမျိုးလိုင်းတွေမှာများသောအားဖြင့်သင်ကြည့်ရတာအရမ်းခက်ပါတယ်နည်းပညာဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုပုံမှန်ထုတ်ဝေနေသည့်လိုင်းတစ်ခု သင်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့၊ ငါအကြံဥာဏ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ bot ကပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်းပြပေးတဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုတောင်မလွတ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ငါလုပ်ဆောင်မှုနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျဖန်တီးခြင်း၏ခလုတ်များနှင့်တဆင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကြီးစွာသောအသေးစိတ်နှင့်ရှင်းပြသောပူးတွဲပါဗီဒီယိုမဟုတ်သလို။
1 အလွန်ကြီးမားသော bot မှကျေးဇူးတင်စကားကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းဖြင့်လုပ်ပါ
2 Telegram တွင်ခလုတ်များပါသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးရန် Channel Help မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး
အလွန်ကြီးမားသော bot မှကျေးဇူးတင်စကားကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းဖြင့်လုပ်ပါ
ဒီနည်းလမ်းသစ်ကိုဗွီဒီယိုနဲ့ဒီဆောင်းပါးရဲ့ပထမအပိုဒ်တွေမှာဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုပြီးကောင်းကောင်းမှတ်ချက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် Telegram အတွက်ခလုတ်များနှင့်အတူလှပပြီးစတိုင်ကျတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးပါ bot ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Channel အကူအညီ၏အမည်ဖြင့်သွားရသောအလွန်ကြီးစွာသော botနှင့် သင်ဤ link ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာဤ bot သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအရာအားလုံးကိုစာရင်းတစ်ခုအဖြစ်အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်ပြောရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ Share ခလုတ်ကိုထည့်ရန် option မရှိခြင်း၊ အလှည့်အားဖြင့်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်၎င်းတွင်ထည့်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ စပိန်ဘာသာစကား
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တိုင်းတာမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအရမ်းသုံးရတာအရမ်းလွယ်ကူပြီးအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါကမင်းကိုအမြဲပြောနေသလိုပဲ၊ အရမ်းကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေပြည့်နှက်နေတယ်။
Telegram တွင်ခလုတ်များပါသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးရန် Channel Help မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး
၎င်းသည် channel များပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ဖန်တီးထားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်လိုချင်သူမည်သူမဆို၊ တစ် ဦး ချင်း၊ အခြားချန်နယ်များကိုသင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းဝေမျှရန် Share option ရှိသော်လည်းအုပ်စုများသို့လည်းပို့နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်သောကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်အိုင်ကွန်များသို့မဟုတ်စာသားများမနှစ်သက်သောအရာများထည့်သွင်းရန်အပြင်အများဆုံးသောခလုတ်လေးခုအထိအလိုရှိသည့် emoticons များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲတွင်သတင်းစကားကိုဖျက်စီးရန်ရွေးချယ်မှု။ ဤသည်မှာကမ်းလှမ်းမှုစတိုးဆိုင်များအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် bot သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော၊ ကမ်းလှမ်းမှုများကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာ၏တည်းဖြတ်မှုတွင်ဖော်ပြပါမည်။ ဤအရာအလုံးစုံကိုအလိုအလျောက်လမ်းဖြင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် bot ကိုစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ထားသည့်ချန်နယ်သုံးစွဲသူများအားပိတ်ပင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယေဘူယျ keypad များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောလိုင်းများတွင်သို့မဟုတ် Share option မှတစ်ဆင့်“ Share Post” မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသူမည်သူမဆိုပေးပို့နိုင်သည်။
လေထဲတွင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုတည်းဖြတ်ရန်ရွေးချယ်မှု၊ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်မှုကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဤစာသည်စာကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ပေးပို့ပြီးနောက် မှစ၍ ၄၈ နာရီကျော်လွန်သွားသည်။
Channel Help မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောစာများအားလုံးသည် bot ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်နိုင်သည်၊ ချန်နယ်သို့ပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်အလိုရှိသူနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
Channel ကို သုံး၍ link ခလုတ်ပေါင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းစကား
Telegram မှာခလုတ်တွေနဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖန်တီးဖို့ bot တစ်ကောင်ဘယ်လိုတွေ့နိုင်လဲ၊ အဲဒါကငါတို့အတွက်အရမ်းလွယ်ကူတယ်၊ အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဆက်ပြောသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအထူးသဖြင့်ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာရှိနေတဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ၊ ထိပ်ဆုံးမှာ၊ Channel Help ရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာသင် bot ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ့်အခြားမေးခွန်းများကိုခလုတ်များနှင့်မည်သို့စတင်ပုံ၊ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အခြားမေးခွန်းများကိုမည်သို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြပါမည် သောလက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ၏ကြာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Telegram တွင်ခလုတ်များဖြင့်စာများဖန်တီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းသစ်
Galaxy Buds + ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်
ဒဏ္Tourာရီဆန်သောအကျင့်ဆိုးမှာ RPG နှင့် gacha Seven Deadly Sins: Grand Tour de Neatmarble ဖြစ်သည်